Kuuboonada - Geofumadas
Eeg iskuduwaha Google Earth ee Excel - una beddel UTM
Waxaan haystaa xogta Google Earth, waxaanan rabaa in aan sawiro iskudhufo ee Excel. Sida aad u arki karto, waa sawir leh xertooyin 7 iyo guri leh afar geesood. Keydso xogta Google Earth. Si aad u soo dejiso xogtan, waxaad riixi kartaa "Meelaheyga", oo dooro "Goobta meel sida ..."
Isticmaalidda qaab-dhismeedka, waxaad ku baran kartaa qaabka Microstation, laga bilaabo liistada rikoodhada iyo masaafada ee Excel, ama liiska xuduudaha x, y, z. 1 Case: Tilmaamaha Tilmaamaha iyo Meelaha Laga yiraahdo waxaan haynay xogtan miiskaan ka jirta: Marka koowaad ee aad leedahay saldhigyada ...
Liiska dhoofinta ee Google Earth isku juquraafi ka Excel, Image iyo Text Rich
Tani waa tusaale ahaan sida Excel leh waxaad u diri kartaa nuxurka Google Earth. Kiisku waa sidaan: Waxaan leenahay liis iskudhafan oo ah jajab tobanle ah (lat / lon). Waxaan rabnaa inaan u dirno Google Earth, waxaanan dooneynaa inaan tusno xeerka qodobka xiisaha, qoraalka kudheerta, qoraalka cad, sawir ...
Aan aragno kiiska: Waxaan u tagay beerta si aan u dhiso guri, sida ku cad miiska soo socda iyo waxaan doonayaa inaan ku sawirto Google Earth, oo ay ku jiraan labo sawir oo aan qaatay. UTMa Geographical coordinates qaab decimal, sida ay tahay ...
Aynu aragnay waxa dhibku yahay: Waxaan haystaa xogta cod-bixiye leh jihooyin iyo fogaan, waxaanan doonayaa inaan ku dhiso AutoCAD ama Microstation. Markii hore waxaan arkeynay in AutoCAD ay leedahay habka nuujinta xogta noocan oo kale ah qaabka @dist <halka Microstation lagu sameeyo iyada oo loo marayo AccuDraw. Waa hagaag, marka laga jawaabayo noo ...
post Tani waa jawaab u Diego, ee Paraguay na ka dhigaysa su'aasha soo socota: raaxo ah inay isaga soo salaamayaan ... waqti ka hor by search a in uu si qalad ah u iman raba in aad website oo aan helay iyadoo aad u xiiso badan, labada by sida orday habka saaxiibtinimo ee aad u gudbin karto sayniska. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, haddii aad taqaanid wax ...
3D rasiidh Dgn Dwg